‘प्रचार गरेर मलाई सस्तो लोकप्रियता चाहिँदैन्, साग खेल सम्पन्न गर्न रातिदिन काम गरिरहेको छु’
कर्पोरेट नेपाल , २३ कार्तिक २०७६, शनिबार, ०४:५६ pm
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) निर्धारित मितिमै हुने दावी गरेका छन् । उक्त प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण तयारी करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले विश्वास दिलाए ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा विश्वकर्माले साग प्रतियोगिता भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नेगरि आफूहरुले दिनरात काम गरिरहेको जनाए । उनले भने, ‘सागको लागि करिब करिब तयारी पूरा हुने दिशामा छ । यो गेम भव्यरुपमा र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
विश्वकर्माले साग राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकोले खेलप्रेमी र सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक आ–आफ्नो ठाउँबाट दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाए । उनले सामाजिक सञ्जालमा साग प्रतियोगिता समयमै नहुने हो कि ? भनेर अन्यौलतासँग जोडेर गरिएका टिकाटिप्पणीप्रति भने असन्तुष्टी पोखे । १२ औं साग प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न भैसकेपछि १३ औं प्रतियोगिता २०७२ सालमा गर्ने अभिभारा नेपालको काँधमा आएपछि समयमै साग हुन नसक्नु दुःखद् भएको विश्वकर्माको गुनासो छ ।
आफूहरु सरकारमा आएपछि उक्त प्रतियोगिता समयमै गर्नेगरि अभिभारा र अवसरको रुपमा लिएको र सोहीअनुसार काम गरेको पनि उनले सुनाए । आफूहरुले सात आठ महिनामै पोखरा रंगशाला निर्माण काम सम्पन्न गर्न गइरहेको पनि विश्वकर्माको भनाई छ ।
उनले भने, ‘मंसिर पहिलो हप्ताभित्र निर्माण काम सम्पन्न हुन्छ । दशरथ रंगशालाको पनि निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । सातदोबाटोमा पनि सम्पन्न हुँदैछ । तेक्वान्दो, कराँते र लङ टेनिशलगायतका नयाँ पूर्वाधारपनि सातदोबाटोमा निर्माण गरेका छौं ।’
साग आयोजना गर्नको लागि निकै जोखिम र चूनौतिहरु रहेपनि आफूहरुले ती सबै चूनौति र जोखिमहरुको सामना गरेर अघि बढेको उनले सुनाए । मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘म हिरोईज्ममा विश्वास गर्दिन् । काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । खुरु खुरु काम गरिरहेको छु ।’
कतिपयले अहिले धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको देख्दा ‘जब राति तब बुढी ताती’ भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गरेको सुनाउँदै उनले साग मुखमै आईसकेकोले यसको लागि आफूहरुले रातोदिन काम गरेको स्पष्ट पारे । विश्वकर्माले थपे, ‘हिजो राति त मैले झिमिक्क आँखा पनि झिम्क्याएको छैन् । दशरथ रंगशालामा भिआईपी छानो हाल्ने काम थियो । त्यो काम राति नै गर्नुपरेकोले हिजो रातभरि काम गरियो ।’
मन्त्री विश्वकर्माले रातदिन काम गर्नु के अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले मंसिर १५ गतेको साग गेमको मिति तलमाथि नहुने दोहोर्याए । उनले भने, ‘मैले स्यावासी र प्रशंसा खोजेको होईन् ।’ उनले दशरथ रंगशालाको प्याफिट मंसिर पहिलो हप्ताभित्रै सम्पन्न भैसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘परिस्थिति हाम्रो काबुमा छ । पूर्वाधारको कुनै समस्या छैन् । अहिलेको कामको प्रगति हेर्दा विश्वासको आधार तय भएको छ ।’
सागको लागि नेपाली खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणदेखि व्यवस्थापकीय सबै काम भैरहेको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, सागकोलागि विदेशी पाहुनाहरुलाई आमन्त्रण गर्ने काम पनि भैसकेको उनले जनाए । उनले दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको शनिबार काठमाडौँमा बैठक बसेको पनि बताए । उनकाअनुसार उक्त बैठकमा सातवटै देशका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । १३ औँ सागका खेलहरु काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र जनकपुरमा हुँदैछ ।
मन्त्री विश्वकर्माले हिटिङ र स्विमिङ पुल निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेकोले कुनै समस्या नहुने दाबी गरे । आफूहरुले थोरैभन्दा थोरै लगानीमा धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्नेगरि काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
गाडि वा सिट नपाएर दशैंमा केही घर जान नपाउने अवस्था आउँदैनः हमाल
साग खेलकुद तयारी भद्रगोल, प्यारापिटको छानो अझै चीनमै
यसअघि सम्पन्न हुने भनिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलको म्याद फेरि थप्ने तयारी
गौतमबुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग बन्यो, अब लाइटिङ र मार्किङ गरिने